Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Uganda » Mutungamiri weUganda Anoita Zvakanaka Kuvhurazve hupfumi
HE Yoweri Museveni - Mufananidzo wakakodzera gou.go.ug
Mutungamiri weUganda, Yoweri Museveni, vaita zvakanaka pakutaura kwavo kwegore idzva umo vakapa chirevo chekuvhura hupfumi zvizere masvondo maviri mushure mekuvhurwa kwezvikoro muna Ndira 2, 10.
Kuvhurwa kwacho kwakakatyamadzwa kutanga nebazi redzidzo, iro rakanga raita kuti nyika ivharwe kwenguva refu pasi rose mushure memakore maviri ekuvharwa nemamwe matanho anotevera sezvaratidzwa pazasi.
Bazi rezvekutakurwa, iro rave kushanda pa50%, rakavhurwa zvizere, asi nemaSOP anodiwa sekupfeka mamask pamwe nekubayiwa kwakazara nevashandi vemotokari dzevashandi vehurumende nevafambi. Dzimba dzemacinema nezviitiko zvemitambo zvakabvumidzwawo kushanda nemaSOP.
Nzvimbo dzemitambo, makonzati, nenzvimbo dzevaraidzo dzakavhurwa pakati pehusiku musi weMuvhuro, Ndira 24, hupenyu hwehusiku huchiputika panzvimbo apo vamwe vaifara vakasarudza kutamba pabhawa nepamusoro pemakirabhu ehusiku mumapoka kuti vasiye mweya mushure memakore maviri varipo. kusabvumirwa kufamba.
Zvisineyi, maBodaboda (midhudhudhu michovha) akanzi aenderere mberi nekucherechedza nguva dzekuvharirwa vanhu kubva pa1900 kusvika 0530 maawa sezvo akadzimwa nekuda kwekusachengeteka.
Muchirevo chakapihwa pakuvhurwazve nemutauriri wemapurisa ekuUganda, Fred Enanga, akabvuma kuti zvakakosha kumabhizinesi nezvikamu zvakaita setsika, kugamuchira vaenzi, uye hupfumi hwehusiku kuti vaenderere mberi uye vararame, sezviri mugwara renyika.
Akati Enanga: “Kunoratidza kutanga kwoupenyu hwousiku uye rwendo rwahwo rwokuzvivakazve. Inosanganisira huwandu hwakasiyana hwekuita mumataundi nemaguta pakati pemaawa 7 pm kusvika 6 am, kusanganisira ma pubs, makirabhu, macafe, maresitorendi, zvitoro, mabhaisikopo, theatre, makonti uye zvekufambisa.
“Naizvozvo, mutyairi wakakosha wekushanyirwa, kutandara, uye kukura kwebhizinesi mukati memaguta, maguta, nemaruwa. Patove nekudiwa kukuru kwemakirabhu ehusiku, uye varaidzo yemagariro, mabhawa, uye saunas pamwe nekufamba kusingabvumirwe kwevatyairi. Munhu wese ari kufara.”
Zvakadaro, akayeuchidza veruzhinji kuti munhu wese anofanirwa kukoshesa kutevedza mitemo yehutano nekuchengetedza inodiwa kuderedza kupararira kweCOVID-19 kungoti kupfeka masiki uye zvinodiwa zvekufambidzana zvine hunyoro mumakirabhu ehusiku, mabara, uye discos.
Akawedzera kuti kuvhurwazve kunouya nekuwedzera kwehuwandu hwenyaya nyowani. Naizvozvo, zvakakosha kuti munhu wese atore nekungwarira kuvhurazve nenzira yakachengeteka. Izvi zvinosanganisira masisitimu ekufemesa mhepo munzvimbo dzese, zviteshi zvehutsanana mumakirabhu ese, kuwedzera kuwanda kwehurongwa hwekuchenesa, uye kutumirwa kwevashandi vakadzidziswa zvakanyanya vanonyatsoziva kutonga kwevanhu.
Mhedzisiro yeCCIDID-19 bvunzo dzakatorwa muna Ndira 19, 2022, dzakasimbisa mazana maviri nemakumi maviri emakesi matsva; 220 akawedzera nyaya; 160,572 kuwedzera kudzoreredza; uye 99,095 yose miyero inopihwa yehuwandu hwe12,599,741, inomiririra chikamu che42,000,000%.
Hurumende yeAustralia yava nekodzero dzemureza wevaAboriginal